Cradle ukuba Cradle – Cradle ukuba Cradle Design
Ingabe "imbeleko ukuze imbeleko" Akuyona umusho kodwa hhayi kakhulu akhanyisayo iqukethe umqondo elihlakaniphile, primordial, osebenzayo futhi ezibalulekile ezikhathini zanamuhla.
With wonke tiphawulo odlule, hhayi ukusho, Nokho, kuba lula ukuba lelisu. Ngeke kube lapho search kuphela short-term inzuzo futhi uma abaphathi ukubuka kuwukuba nombono omfushane.
It is a umqondo lakhiwa William McDonough futhi Michael Braungart, okokuqala wamapulani kanti owesibili a engineer amakhemikhali, uma kungenjalo imemori ehluleka us.
The amadili Umqondo kanye design (iphrojekthi) imikhiqizo kanye izinqubo zabo, ukuze wonke amaqembu njengoba (izingxenye futhi izinto zokusetshenziswa) ezihilelekile ukukhiqizwa kwale mikhiqizo kungenziwa ngokugcwele isetshenziswe izinqubo ezintsha zokukhiqiza, emva imikhiqizo ilahlwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi umuntu akufanele siphambanise lo mqondo kanye kabusha. Kuyinto okuhluke.
Isibonelo esingokoqobo kabusha iyona iphepha. Ngemuva ukusetshenziswa (amashidi white isb), amaphepha asesebenzile, umcimbi omkhulu imithombo kanye kwagezi, uyoveza izinga iphepha ephansi futhi, mhlawumbe, brown medium noma aphuzi, isibonelo.
Okungukuthi, umkhiqizo ekhiqizwa kuleli kabusha wasifuna reprocessing, energy and izinsiza, futhi umphumela waba i product wawungaphansi original.
Umqondo imbeleko ukuze imbeleko (bezalwa baze design imbeleko), reprocessing komkhiqizo imfucuza izokwenza umkhiqizo izinga omusha esilingana noma ngaphezulu kuka original. Lokhu akusho ukuthi kungenxa isicelo esifanayo noma emakethe efanayo.
Ngaphezu kwalokho, kukhona sibakhathalele bonke inqubo production and izinto zokusetshenziswa esetshenzisiwe imvelo kanye ngempumelelo.
Uma uhlelo iyasebenza umjikelezo ithele (ukukhiqizwa - ulahle - production) ephakamisa value ngaphandle ilimaza semvelo.
Ezinye izibonelo isicelo leli qiniso:
Waste silingana ukudla.
Strange? Kodwa ake sithi umkhiqizo emva ukusetshenziswa kungenziwa alahlwe okungenani processing angase abe, isibonelo, e Umanyolo. Ngokushesha uzobe yokondla emuva ejele umsebenzi yizicukuthwane, esetshenziselwa ezolimo kanye isizukulwane ukudla.
Esinye isibonelo, nakuba hhayi kakhulu nice lapho uqala, esikhundleni sokusebenzisa zesivikelo sesifuba ukotini kungokwemvelo, embonini yendwangu, ogama production, Cotton, kufunwe ukusetshenziswa kakhulu zinambuzane, kungani ningasebenzisi smart fibre okubolayo noma zesivikelo sesifuba ukuthi kungavumela reprocessing umnyuziki, odala yendwangu entsha, ngemibala new noma izicelo.
Uhulumeni Chinese wakha emadolobheni amaningana usebenzisa umqondo bezalwa baze imbeleko (C2C Model). Uma China sekuzokwakhiwa yonke imizi emisha ngokusho ubuchwepheshe ezivamile, Cishe akekho noma isitini ukhonkolo, hhayi emhlabeni, ngokwanele ukuba banelise izidingo zakho.
Nike seluvele isicathulo / izicathulo ngaphansi umqondo C2C.
Ezinye ukugxekwa imodeli:
Em pesquisa na Internet, observamos que a MBDC, ukuxhumanisa ngezansi, Empresa do McDonough e Braungart, igcina wedwa in the izitifiketi C2C imodeli.
Yini uhlangothi evumela ukunwetshwa accreditation futhi uhlelo ukuqinisekiswa, ngakolunye uhlangothi, It egcina ukuthembeka siyiqiniso, de quem possuir o certificado.
Njengoba kuyaziwa, futhi kuba, namuhla, a evamile, anothi ukuthi izinga akuseyona differentiator, e SIM, It is a simo lesisisekelo ukuncintisana emakethe.
Nokho, lokhu kubonisa iqiniso lokuthi bonke ukukhiqiza, omhlaba, izinga elifanayo?
Ingabe positioning marketing?
Imibuzo ukuthi ashiye engaphenduliwe.
Iminyaka edlule, We wabhala isihloko mayelana ekwandeni izitifiketi 9000 (izinga), 140000 (kwezemvelo), a "complexidade" da Sarbanes-Oxley (a Sox famosa), isivumelwano Basel II (amabhange), e isso não evitou a crise de 2008, the financial crisis global!
Yini elingekho ethics, namagugu, obala, umthwalo futhi nesifiso ukulungisa ukuphambuka eminyaka of nezindinganiso zokuziphatha nezenhlalo ezazilandelwa, nemfundo kanye nezimiso eziyisisekelo zokuphila emphakathini futhi enenhlonipho.
It, engazange eqinisekisiwe yimuphi ukuthi eyolungisa kube!
Sobre o "Cradle ukuba Cradle Design":
← Ukuhwebelana kwembulunga yonke, Amathrendi izifundo
5 Porter amabutho →